बैठकमा बालेन साहले किन टेबुल ठोके ? – Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ जनमञ्च ∕ बैठकमा बालेन साहले किन टेबुल ठोके ?
बैठकमा बालेन साहले किन टेबुल ठोके ?
झिल्को डटकम असार ६, २०७९ गते २१:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ६ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह आइतबार भएको नगरसभा अघि कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरुसँग रिसाएका छन् । कार्यपालिका बैठकमा नगरसभामा प्रस्तुत हुने विषयका बारेमा वडाध्यक्षहरुले प्रश्न गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यही क्रममा उनले टेबुल ठोक्दै रिस देखाएका हुन् ।
क्याटेगोरी : जनमञ्च, राजनीति, बाग्मती प्रदेश
ट्याग : #balen, #hot
५वामदेव गौतमलाई निष्कासन गर्ने पाँच नेता कारबाहीमा
६एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै
७बाबुराम भट्टराई माओवादीमा फर्कने सम्भावना छ, कुराकानी पनि भइरहेका छन् : देवेन्द्र पौडेल